တစ်ပတ်အတွင်း ရုံတင်ဇာတ်ကားများ (၁၈.၈.၂၀၁၇) - Akhayar Lifestyle
တစ်ပတ်အတွင်း ရုံတင်ဇာတ်ကားများ (၁၈.၈.၂၀၁၇)
16 Aug 2017 . 5:39 PM
အခရာရုပ်ရှင်ချစ်ပရိသတ်ကြီး ခင်ဗျာ၊ ကျန်းမာတော်မူကြပါစ။ အခရာပရိသတ်တွေ ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ တစ်ပတ် တစ်ပတ်ရုပ်ရှင်ကားတွေကို အလျဉ်မီအောင် ကြည့်နိုင်စေကြောင်း အခရာဝိုင်းသားတွေက အမြဲတမ်းဆုတောင်းနေလျက်ပါ။ ဒီတစ်ပတ်မှာလည်း နာမည်ကြီး သရဲကား Annabelle အပါအဝင် အခြားဇာတ်ကားကောင်းတွေလည်း ရုံတင်မှာမို့ ဘယ်ရုံမှာ ဘယ်ကားပြဆိုတဲ့ မျိုးကြီး သီချင်းလေးနဲ့ တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ မကြည့်ခင် အမြည်းကြည့်လို့ရအောင် YouTube Link တွေပါ တင်ပေးထားတော့ ဘယ်ကားကြည့်ရမယ်ဆိုတာ ရွေးချယ်လို့ ရသွားတာပေ့ါ။ Ooredoo ရဲ့ပေါင်းကူးဒေတာနဲ့ဆို အင်တာနက်သုံးရတာ အကုန်အကျနည်းပါတယ်။ ကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့ဒေတာတွေ သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း ကုန်အောင်မသုံးဖြစ်ရင်တောင် နောက်လတွေမှာ ဆက်သုံးလို့ရပါတယ်။ဗီဒီယိုတွေကြည့်မလား။ ဒေါင်းလုတ်ဆွဲမလား။ YouTube ကြည့်မလား။ Ooredoo ရဲ့ပေါင်းကူးဒေတာက သုံးလို့အကောင်းဆုံး Data Package ပါပဲ။ ဒီ Post က YouTube Video တွေကိုလည်း Ooredoo ရဲ့ ပေါင်းကူးဒေတာနဲ့ သာသာယာယာကြည့်လို့ ရတာပေ့ါဗျ။ ဒေတာ Bonus 50% ပေးနေပြီဆိုတော့ …
Annabelle : Creation – 2D
ဒီကားဟာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Annabelle ရဲ့ ကနဦးအခြေအနေကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ကားဖြစ်ပြီး The Conjuring Series ရုပ်ရှင်ကားတွေရဲ့ လေးကားမြောက်ဇာတ်ကားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ US မှာ သြဂုတ်လ ၁၁ ရက်နေ့ကမှ ရုံတင်ထားတဲ့အတွက် နိုင်ငံတကာနဲ့ သိပ်မကွာပဲနဲ့ ဒီမှာလည်း ကြည့်နိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ IMDB Rating 7.2 ရရှိထားပြီး Rotten Tomatoes မှာ 68% ရရှိထားတဲ့ ဒီကားဟာ လက်ရှိ Box Office မှာလည်း နံပါတ် ၁ နေရာရရှိထားပါတယ်။ ဝေဖန်ရေးဆရာတွေဆီက အကောင်းမြင်မှတ်ချက်တွေလည်း ရရှိထားတဲ့အတွက် မနှေးအမြန် သွားကြည့်သင့်ပါပြီ။
နေပြည်တော် – Mingalar Cineplex (ဂမုန်းပွင့်၊စံရိပ်ငြိမ်) -မင်္ဂလာဒဂုံစင်တာ ၂ – မင်္ဂလာစံပြ ပွဲချိန်
10:00AM, 12:30PM, 3:30PM, 6:30PM, 9:30PM
10:00AM,12:10PM, 1:00PM, 2:30PM, 4:00PM, 7:00PM, 7:35PM, 9:40PM (Fri to Sun)
10:00AM, 12:10PM, 1:00PM, 4:00PM, 5:15PM, 7:00PM (Mon to Thu)
09:30AM, 11:50AM, 2:10PM, 4:30PM, 6:50PM, 9:15PM (Fri to Sat)
09:30AM, 11:50AM, 2:10PM, 4:30PM, 6:50PM (Sun to Thu)
JCGV City Mall (St. John) ပွဲချိန်
10:00AM, 12:15PM, 2:40PM, 5:00PM, 7:20PM, 9:40PM (Fri to Sun)
10:00AM, 12:15PM, 2:40PM, 5:00PM, 7:20PM (Mon to Thu)
9:45AM, 12:00PM, 5:00PM, 7:30PM, 9:45PM (Fri to Sat)
9:45AM, 12:00PM, 5:00PM, 7:30PM (Sun to Thu)
Mega Ace Cineplex (သာကေတ၊ မြရတနာ) -Mega Ace Cineplex (တာမွေ၊ ရွှေဗဟို) ပွဲချိန်
Mega Ace Cineplex (မြောက်ဥက္ကလာပ ၊ကန်သာယာ) ပွဲချိန်
10:15AM, 12:45, 3:45, 6:45, 9:15
10:30AM, 1:30PM, 4:30 PM, 7:30 PM, (Fri to Thu)
အကယ်ဒမီထွန်းထွန်းတစ်ယောက် အစွမ်းကုန် သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဒီကားကြီးကတော့ ရုံတင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါရိုက်တာ စတီးလ် (ဒွေးမေတ္တာ) ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားမှာ ခန့်စည်သူ၊ အိချောပိုနဲ့ အခြားသရုပ်ဆောင်တွေ သိုင်းဝိုင်းပါဝင်ထားပြီး သောကြာနေ့မှာ ဒီရုံတွေဆီ ဝင်လာပါပြီဗျာ။
ရှေ့ဆောင် – မင်္ဂလာ(သိမ်ကြီးဈေး) –Top Royal ပါရမီ စိန်ဂေဟာ – Mingalar Cineplex (ဂမုန်းပွင့်၊စံရိပ်ငြိမ်) – မင်္ဂလာစံပြ ပွဲချိန်
9:30PM, 9:50AM, 12:30PM, 3:30PM, 4:50PM, 6:30PM, 9:10PM, 9:55PM (Fri to Sun)
9:30PM , 9:50AM, 12:30PM, 2:30PM, 3:30PM, 6:30PM, 7:30PM (Mon to Thu)
09:45AM, 12:30PM, 3:15PM, 6:15PM, 9:00PM (Fri to Sat)
09:45AM, 12:30PM, 3:15PM, 6:15PM (Sun to Thu)
09:30AM, 12:30PM, 3:30PM, 6:30PM, 9:30PM (Fri to Sun)
09:30AM, 12:30PM, 3:30PM, 6:30PM (Mon to Thu)
10:00AM, 12:45PM, 2:15PM, 3:45PM, 6:45PM, 9:30PM(Fri to Sat)
10:00AM, 12:45PM, 2:15PM, 3:45PM, 6:45PM (Sun to Thu)
Mega Ace Cineplex (သာကေတ၊ မြရတနာ) – Mega Ace Cineplex (တာမွေ၊ ရွှေဗဟို) ပွဲချိန်
10:30AM, 1:00PM, 4:00PM, 7:00PM, 9:30PM
မြို့မ၊ မန်းနေပြည်တော် (ဆိုင်းတန်း) ပွဲချိန်
9:45AM, 12:45, 3:45PM, 6:45, 9:45PM (Fri to Sun)
9:30AM, 12:30, 3:30PM, 6:30PM (Mon to Thu)
Mega Ace Cineplex (ချမ်းအေးသာဇံ မန္တလေး၊ မြို့ဂုဏ်ရောင်)
Posted by Htoo Charr on Thursday, 15 June 2017
ဒီကားဟာ Cars ဇာတ်လမ်းတွဲတွေရဲ့ ၃ကားမြောက်ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီးတော့ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ထွက် Cars2ဇာတ်ကားရဲ့ နောက်ဆက်တွဲဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ Lightning McQueen ဟာ မျိုးဆက်သစ်ပြိုင်ကားတွေကြားမှာ သူသာလျှင် အကောင်းဆုံးပြိုင်ကားဖြစ်သေးကြောင်း သက်သေပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ IMDB Rating မှာ 7.1 ရရှိထားပြီး Rotten Tomatoes မှာတော့ 68% ရရှိထားပါတယ်။ လက်ရှိ Box Office မှာ No. 23 ရောက်နေပြီး အပြုသဘောဝေဖန်မှုတွေရတာ များတာကြောင့် ရုံအရောက် ပြေးကြည့်သင့်တဲ့ Animation ကားလေးပါပဲ။
9:45AM,11:50AM,2:00PM,4:10PM,6:20PM,9:00PM (Fri to Sun)
9:45AM,11:50AM,2:00PM,4:10PM,6:20PM (Mon to Thu)
ဒါရိုက်တာ မောင်မျိုးမင်း(ရင်တွင်းဖြစ်) ရဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေ မကြည့်ရတာ ကြာပါပြီ။ အခုတစ်ခါမှာတော့ ဝတ္ထု သိန်းသန်းထွန်း၊ ဇာတ်ညွန်း အောင်ကြီး ရဲ့ လက်ရာကို တွဲဖက်ဒါရိုက်တာ အောင်ချမ်းသူ၊ ထူးနွယ်အိမ်တို့နဲ့ တွဲဖက်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ရာဇဝင်ရိုင်းသူများ ဇာတ်ကားလာပါပြီ။ အငြိုးအတေးကြီးသူတွေရဲ့ သမိုင်းက ရာဇဝင်ရိုင်းတတ်တယ်လို့ ဆိုထားတဲ့ ဒီကားမှာ မင်းသားပြေတီဦး၊ မြင့်မြတ်တို့နဲ့အတူ မင်းသမီး ပက်ထရစ်ရှာ နဲ့ လိုင်လာခမ်းတို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြပါတယ်။
Mingalar Cineplex (ဂမုန်းပွင့်၊စံရိပ်ငြိမ်)၊ သမ္မတ၊ သွင်၊ မင်္ဂလာစံပြ ပွဲချိန်
09:45AM,3:30PM (Fri to Thu)
ဝင်းလိုက်၊ မင်္ဂလာဒိုင်းမွန်း ပွဲချိန်
9:30AM, 12:30 PM, 3:30PM, 6:30PM, 9:30PM (Fri to Sun)
9:45AM, 12:45 PM, 3:45PM, 6:45PM (Mon to Thu)
" ရာဇဝင်ရိုင်းသူများ " ( Official Trailer )
**** " ရာဇဝင်ရိုင်းသူများ " ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ပြပြီ ****၁၁ – ၈ -၂၀၁၇ (သောကြာနေ့) မှစတင်၍#ရန်ကုန် -သမ္မတ၊ သွင်၊ မင်္ဂလာ (သိမ်ကြီးဈေး)၊ မင်္ဂလာစံပြ (ဘုန်းကြီးလမ်း)၊ Top Royal (ပါရမီ)၊ ဂမုန်းပွင့် (စံရိပ်ငြိမ်)၊JCGV (Maw Tin)၊ JCGV (Square)၊JCGV (Junction City)၊Junction ( စိန်ဂျွန်း )မြဟံသာ Red Radiance (သန်လျင်)၊လှည်းတန်းစင်တာ Red Radiance#မန္တလေး – ဝင်းလိုက်၊ မြို့မ၊ ဒိုင်းမွန်း ,JCGV ,#မှော်ဘီ – Paradiso#ပြည် – မင်္ဂလာထွန်းသီရိ#ပုသိမ် – ရွှေပြည်တော်#နေပြည်တော် – JCGV၊ အောင်သပြေ၊ ဇေယျာသီရိ#မြ၀တီ – သွန်းရွှေစင်#ဘားအံ – တက်နေ၀င်း၊ ဦးဆောက်ပန်း#မော်လမြိုင် – JCGV#လားရှိုး – သီတာအေး၊ သိန်းထိုက်၊ အောင်သီရိ#ပြင်ဦးလွင် – ချယ်ရီလွင်၊ Movie Planet#တောင်ကြီး – မြသုခ . Mega Ace#မကွေး – စံပြ#ဗန်းမော် – စတား#ရေနံချောင်း – ရတနာ #ပခုက္ကူ – သီဟ#မိတ္ထီလာ – ဂရင်းး#တောင်ငူ – New 3D Cinema#ပဲခူး – Icon (Mingalar Cinema)#မြိတ် – မြိတ်မင်္ဂလာ#မုံရွာ – Paradiso#ဖျာပုံ – Paradiso#အောင်ပန်း – Paradiso#သထုံ – Paradiso#ကျောက်ပန်းတောင်း – Paradiso#မြင်းခြံ – မြေလတ်ဂုဏ်#မြစ်ကြီးနား – ဧရာတို့မှာ တစ်ပြိုင်တည်းပြသပါတော့မယ်နော်။ကြိုတင်လက်မှတ်များ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ
Posted by ရာဇဝင်ရိုင်းသူများ on Thursday, 20 July 2017
The Lady ဇာတ်ကားကို ရိုက်ကူးတဲ့ ဒါရိုက်တာကြီး Luc Besson ကိုယ်တိုင် ရိုက်ကူးဇာတ်ညွန်းရေးပြီး ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်လုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဒီဇာတ်ကားဟာ သိပံ္ပဆန်းကြယ်စွန့်စားခန်းဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။Dane DeHaan က Valerian နဲ့ အသည်းကျော်လေး Cara Delevingne ကတော့ Laureline အဖြစ်နဲ့ ပါဝင်ထားတဲ့အပြင် Clive Owen ၊ Ethan Hawke ၊ Herbie Hancock ၊ Kris Wu ၊ Rutger Hauer နဲ့ အဆိုတော် Rihanna ပါ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဒီကားဟာ Cara နဲ့ Ri Ri ကြိုက်သူတွေတော့ ကြည့်မယ့်ကားလို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ IMDB Rating 6.7 ရရှိထားပြီး Rotten Tomatoes မှာတော့ 50% နဲ့ လက်ရှိ Box Office မှာတော့ နံပါတ် ၁၇ ရထားတဲ့အတွက် ဘာကြောင့် အဆိုးရော၊ အကောင်းရော ဝေဖန်ကြတယ်ဆိုတာ သွားကြည့်သင့်ပါတယ်။
ကြောက် ကြောက် ကြောက်
ဒီကားကတော့ မြန်မာသရဲကားကြည့်ချင်တဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် စိတ်ကြိုက်ဖြစ်မယ့် ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး နိုင်ငံကျော် အနုပညာရှင် ၈ယောက် နေတိုး၊ ထွန်းထွန်း၊ မင်းသွေး၊ ကျော်ကျော်၊ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း၊ ခင်ဝင့်ဝါ၊နန်းခင်ဇေယျာ၊ ပိုပိုတို့ အပြင် ဂျိုကာပါ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ဇာတ်လမ်း၊ဇာတ်ညွှန်း အနေနဲ့ ရာဇဝင်ကို၊ ဒါရိုက်တာ သြရသရိုက်ကူးပေးထားတဲ့ ဒီကားမှာ ဘယ်သူက ဘယ်ဇာတ်ရုပ်နဲ့ ဘယ်လိုပွဲထွက်လာကြမလဲဆိုတာတော့ ပိတ်ကားပေါ်မှာ ဆက်လက်ရှုစားပါခင်ဗျာ။
ရှေ့ဆောင်၊ Mingalar Cineplex ဂမုန်းပွင့် (လှည်းတန်း၊စံရိပ်ငြိမ်) ပွဲချိန်
9:40AM, 12:40PM, 3:40PM, 6:40PM, 9:30PM(Fri to Sun)
9:40AM, 12:40PM, 3:40PM, 6:40PM (Mon to Thu)
12:45PM, 6:45PM, 9:30PM (Fri to Sat)
12:45PM, 6:45PM (Sun to Thu)
09:45AM, 12:45PM, 3:45PM, 6:45PM, 9:45PM (Fri to Sun)
09:45AM,12:45PM,3:45PM,6:45PM (Mon to Thu)
10:00AM, 12:40PM, 3:40PM, 6:40PM, 9:00PM
Mega Ace Cineplex (ချမ်းအေးသာစံ၊ မြို့ဂုဏ်ရောင်) ပွဲချိန်
ကြောက် ကြောက် ကြောက် Official Trailer #1
မိတ်ဆွေများကို ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့် သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ်…7th Sense Film Production ရဲ့ ပွဲဦးထွက် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ဖြစ်တဲ့ "ကြောက် ကြောက် ကြောက်" ဇာတ်ကားကို ဇူလိုင်လမှာ ရုံတင်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်…ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ "ကြောက် ကြောက် ကြောက်" ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရဲ့ Official Trailer #1 ကို မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်…"ကြောက် ကြောက် ကြောက်" ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရဲ့ Music Video, Official Trailer #2 နှင့် အခြားသော အနုပညာ လှုပ်ရှားမှုများကိုလည်း မကြာမှီ တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ…မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ "ကြောက် ကြောက် ကြောက်" ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို ကူညီအားပေးတဲ့အနေနဲ့#ကြောက် ကြောက် ကြောက် Official Trailer #1ကို Share ပြုလုပ်ပေးစေလိုပါတယ်…ချစ်ခင်လေးစားစွာဖြင့်"ကြောက် ကြောက် ကြောက်" ရုပ်ရှင်အဖွဲ့သားများ
Posted by ကြောက် ကြောက် ကြောက် on Monday, 29 May 2017
ဖွေးစိန် (အကယ်ဒမီဖွေးဖွေး) နဲ့ ဟျောင့် ဂျင်းကောင်လို့ ခေါ်ကြတဲ့ မြင့်မြတ်တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ “ဘုန်းကညာနှစ်ပါး” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ရုံဝင်လာပါပြီခင်ဗျာ။ မအေးအေးဝင်း စီစဉ်ပြီး ဒါရိုက်တာ ကိုဇော် (အရုဏ်ဦး) ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့ ဒီကားမှာ ဖွေးဖွေး၊ မြင့်မြတ်တို့နဲ့အတူ ခင်ဇာခြည်ကျော်၊ မုဏ်း၊ မေ၊ ဦးခင်လှိုင်၊ ကိုပေါက်၊ တက္ကသိုလ်ဂွမ်းပုံတို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ဇာတ်ကားပြသချိန် ၂နာရီအတွင်း စိတ်နှလုံးရွှင်လန်းပြီး အရမ်းရယ်ရမယ်လို့ ဆိုထားတဲ့အတွက် မြန်မာဟာသကားကြိုက် ပရိသတ်ကြီး ဘယ်ရုံကို ချီတက်ရမလဲဆိုတာတော့ ဒီလို လမ်းညွှန်ထားပါတယ်။
အခုချိန်တည်းက တစ်ပတ်စာ ကြိုတင်လက်မှတ်တွေလည်း ဝယ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အောက်ပါ ဖုန်းနံပါတ်လေးတွေကို ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ကားကို ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ပွဲစဉ်မှာ ကြည့်ရအောင် တစ်ချက်လောက် ဖုန်းလှမ်းတောက်လိုက်ပါတော့ဗျာ။